Lambarka Uu Antoine Griezmann U Xiran Doono Barcelona Oo La Ogaaday & Xiddig Weyn Oo Looga Qaadi Doono - Gool24.Net
Lambarka Uu Antoine Griezmann U Xiran Doono Barcelona Oo La Ogaaday & Xiddig Weyn Oo Looga Qaadi Doono
Saxiixyada cusub ee Frankie de Jong iyo Antoine Griezmann ayaa saameyn ku yeelan doona lambarada kooxda Barcelona. Xiddiga reer Holland iyo kan France ma ahan kuwa ka sabri kara lambaradii lagu bartay ee kala ah 21 iyo 7, laakiin dhibaatadu waxay tahay in Coutinho uu xirto No.7 halka Carles Alena uu xirto No. 21.
Falcelinta uu xiddiga reer Brazil Philippe Coutinho ka bixin doono marka loo sheego in laga qaadayo maaliyada No. 7 ayaa noqon doonta mid xiiso leh in la arko.
Waa lambar uu jecel yahay Antoine Griezmann uuna u arko inuu yahay lambar nasiib wata, waxaana uu soo xirtay waayihiisa ciyaareed oo dhan oo ay ku jirto xulka France, taasoo la micno ah inuusan aqbali doonin inuu xirto lambar kale.
Inkastoo xiddiga Faransiiska uu haatan ku biiray Barcelon hadana Coutinho kuma soo laaban doono Barca ilaa iyo 4ta bisha Agoosto taasoo kooxda siineysa waqti ay xaalada ku qaboojiyaan.
Waxaa intaas sii dheer in mustaqbalka Coutinho ee Camp Nou inaan la hubin gaar ahaan haddii kooxda ay isku daydo inay keento Neymar.
Haddii Neymar uu ku soo laabta Barca, Ousmane Dembele ayay u badan tahay inuu lambar kale raadsan doono madaama uu haatan xiran yahay lambarka 11aad – laakiin ilaa iyo haatan arintaas ma ahan mid ku soo dhacsan kooxda.
Dhanka kale Frenkie de Jong ayaa loo soo bandhigay inuu qaato maaliyada No.14 ee uu xiran jiray halyeeygii Barcelona iyo Holland Johan Cruyff laakiin waa uu diiday isagoo ku adkeysanaya inuu doonayo maaliyada No. 21 ee uu haatan xiran yahay Carlos Alena.
De Jong muhim ayuu u yahay No. 21 sababo qoys dareed. De Jong awoowgiis, Hans de Jong ayaa dhintay maalintii uu u dabaaldegayay dhalashadiisii 21aad tan iyo markaas De Jong waxa uu xiranayay lambarkaan si uu ugu xasuusto awoowgiis.
Si kastaba, waxa ay u badan tahay in Alena loo sheegi doono inuu lambar kale xusho iyadoo lambarada waqtigaan kooxda ka banaan ay kala yihiin: 16, 17, 19, 24 iyo 25.